सहयोगी मनका धनी कमल पुर्जा | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध सहयोगी मनका धनी कमल पुर्जा
सहयोगी मनका धनी कमल पुर्जा
२०७७, ३ असार बुधबार १६:५६
अंग्रेजीमा एउटा उक्ति छ–Never Blame any day in your life. Good day gives you happiness. Bad day6 gives you experience and worst day give youalesson. All are essential for live. अर्थात् कुनै पनि दिन तिम्रो जीवनको लागि कदापि दोषपूर्ण छैन । राम्रो दिनले तिमीलाई सुख दिन्छ, खराब दिनले तिमीलाई अनुभव दिन्छ र नराम्रो दिनले तिमीलाई शिक्षा दिन्छ । यसैले परिस्थितिहरु जीव्नका लागि सारभूत छन् ।
अधिकांश मान्छेहरु सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने खालका हुन्छन् । वास्तवमा यो प्रवृत्तिमा जिउन ज्यादै नै अज्ञानता हुन्छ । मान्छेहरुले भन्ने गर्छन् मानिस परिस्थितिको दास हो ।
यसको मतलव हामी परिस्थितिको गुलाम हौं । हिजोका दिनसम्म मलाई यसै लागेको थियो । तर यो सत्य रहेनछ । जसले समय परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्न सक्छ, उसले मात्रै हरेक किसिमको परिस्थितलाई अँगाल्न सक्दछ । जसले आफ्नो जिन्दगीलाई चिनेको हुन्छ, उसले मात्र समयलाई चिन्दछ । जसले समयलाई चिन्दछ । उसले मात्र समयलाई असल मित्र बनाउन सक्छ । नवीन जुग्जाली
जसले समय परिस्थितिलाई चिन्न सक्दैनन्, उनीहरुको लागि समय मालिक बन्न सक्छ र जिन्दगी गुलाम बन्न सक्छ । यदि जिन्दगी गुलाम बन्ने स्थिति परिस्थिति पैदा भयो भने उक्त खुशी हुनको लागि अनुकूल परिस्थितिलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया हामी सबै यस्तै मनस्थितिबाट ग्रसित छौं ।
यसकारण हामी आफू दुःखी बन्नुको कारण परिस्थिति भन्ने बुझ्दै आएका छौं । तर यो संसारमा जो जति बुद्धिमान मान्छेहरु छन् । उनीहरु परिस्थितिबाट कहिल्यै विचलित भएनन् । बरु अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिहरुबाट धेरै कुरा सिके । धेरै कुरा जाने बुझे । अनि सफल बन्दै विद्वान बने ।
यसकारण मलाई लाग्छ समय नै गुरु हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ – Everything, everyone is yours teacher around you. । अनुकूल प्रतिकूल समयबाट प्रशिक्षित भई आफ्नो जिन्दगीलाई धन्य बनाउन सफल भएका एक व्यक्तित्वको नाम हो कमल पुर्जा ।
उहाँको जन्म पिता नन्दबहादुर पुर्जा र आमा पूर्णकुमारी पुर्जाको कोखबाट साहिँला पुत्रको रुपमा वि.सं. २०२७ साल मंसिर १५ गतेका दिन दाना गाउँको तितर भन्ने ठाउँमा भएको हो । हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं कमल पुर्जा सानै उमेरदेखि मिलनसार, सहयोगी तथा तीक्ष्ण बुद्धिका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । शिक्षादीक्षाको लागि आफ्नै गाउँको श्री ज्ञानप्रकाश मावि दानामा भर्ना भएका पुर्जाले एसएलसी परीक्षामा दोस्रो (द्वितीय) श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो ।
त्यसपश्चात् बेलायती सेनामा भर्ती हुनुभएका पुर्जालाई बोनम्यारोमा एक किसिमको जटिल समस्या देखा प¥यो।
जसले गर्दा उहाँको बोनम्यारोले शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने रक्त कोषिका जस्तै रक्तकोषिकाहरु कम उत्पादन हुने थालेपछि पूर्जालाई स्वास्थ्य संकटको भूमरीमा फस्नुप¥यो ? तथापि निडर स्वभावका पूर्जाले कहिल्यै पनि हिम्मत हारेनन् । ओरालो लागेको मृतलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भन्ने उक्ति पूजाको जीवनमा चरितार्थ भयो ।
उता आफ्नो स्वास्थ्य गुमाउनुप¥यो । यता आफ्नो जन्म दिने आमा सँधैंका लागि गुमाउनुप¥यो अर्थात् संकटको आँधीबेहरी सहनुप¥यो । एउटा भनाई छ – जुन दुःखको ईलाज छैन त्यो दुःख सहनै पर्छ । यो स्थितिमा हरेक मनुष्यले सहनु नै पर्छ । त्यसैगरी सहनशील क्षमता भएका पुर्जाले पनि यी दुःखहरुलाई सहन गर्न सिके । आफ्नो मनस्थिति स्वतः ठीक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि सिके । आफ्नो घर परिवारलाई राम्रासँग व्यवस्थापन गर्न सिके । यी सबै समयले नै सिकायो ।
सिक्ने क्षमता भएका प्रगतिशील व्यक्तिले संसारका हरेक कुराहरुबाट सिकिरहेको हुन्छ अर्थात् एउटा जागरुक व्यक्तिका लागि सबैतिर गुरु प्राप्त हुन्छन् । पूर्जा त्यस्तै एक जागरुक व्यक्तित्व हुन् । जसले हरेक अनुकुल प्रतिकूल परिस्थितिहरुलाई गुरु मानेर सधेरै कुरा सिकेका छन् । जीवनका यही सिकाइबाट जीवन जिउन पनि सिकेका छन् ।
यसरी जीवन जिउन सिकेका कमल पुर्जाले नेप्लिज हेल्प ग्रुप नामक संस्था निर्माण गरी सो संस्थामार्फत् नेपालका स्थानीय सम्दायहरुका आफ्नो सहयोगी हत्केलाहरु फैलाउँदै आउनुभएको छ । विशेष गरी नेपालका ग्रामिण भेगकहरुमा विकास हुनुपर्छ ।
त्यहाँका गरिब, दुःखी, निमुखा जनताहरुले आर्थिक अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण सेवा लिने मौकाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने भावनाका धनी पुर्जाले म्याग्दीका थुप्रै संघसंस्थाहरुमा उल्लेखनीय सहयोग दानहरु गर्दै आउनुभएको छ । जो निम्न प्रकारका छन् ।
* श्री किसानी उच्च मावि बिमलाई रु.एक लाख ।
* श्री जनप्रिय मावि दरबाङ्गलाई रु.एक लाख ।
* देविस्थान गाउँलाई रु.एक लाख ।
* बेनी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई रु.एक लाख ।
* म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसलाई रु.एक लाख पचास हजार ।
* गलेश्वरलाई रु.पचास हजार ।
* चिमखोलालाई रु.एक लाख ।
* वेगखोलालाई रु.एक लाख ।
* भुरुङ तातोपानीलाई रु.एक लाख ।
* दाना स्कुललाई रु.दुई लाख एघार हजार एक सय ।
* सेवा स्कुललाई रु.पचास हजार ।
* काभ्रे स्कुललाई रु. एक लाख ।
* गाडपार स्कुललाई रु.पचास हजार ।
* पुनहिलाई रु.पचास हजार ।
* रामनगर आमा समूहलाई रु.एक लाख ।
* भरतपुर पुन समाजलाई रु.एक लाख ।
* गोर्खाली समाज युकेलाई रु.एक लाख ।
* मिनबहादुर शेरचन प्रोजेक्ट रु.एक लाख ।
* मगर समाज पिएचडि फण्डलाई रु.एक लाख ।
लगायत थुप्रै स–साना दान नेपालका धेरै ठाउँहरुमा गर्दै आउनुभएको अमूल्य दानका हत्केकाहरु वास्तवमै उदाहरणीय एवम् सराहनीय छन् । जुन किसानले आफ्नो भकारीको एक चौथाई अन्न बिउलाई खेतबारीमा लगेर मिल्क्याउने हिम्मत राख्दछ ।
वास्तवमा उसले मात्र केही समयपश्चात् दशौं गुणा अन्न फल प्राप्त गरी भकारी भर्ने सौभाग्य पाउँछ । यो प्रकृतिको नियम हो । जसको दिल खुल्छ उसको दिलमा मात्र ईश्वरले आनन्द भर्न पाउँछ । जसको करुणाको हत्केला खुल्छ । उसको हत्केलामा मात्र प्रकृति अमृत वर्षाउन सक्छ।
यसकारण दिनेको भकारी र हत्केला कहिल्यै पनि खाली हुँदैन । तसर्थ कमल पुर्जा हिजो पनि धनी हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनसम्म पनि उत्तिकै धनी हुनुहुन्छ । बाहिर सुनको धनी हुनुहुन्छ भने भित्र सुन्दर मनको धनी हुनुहुन्छ ।
यसैले रुमी भन्नुहुन्छ
“सबै गुमाउनु जस्तो प्राप्ति
अरु केृही छैन ्
अँध्यारो रातमा उदाउने भएको भएरै
जून त्यत्ति उज्यालो छ ।”
Previous articleडोको बुन्दै बृद्ध..
Next articleयसरी बन्दैछ भकिम्लीको स्वर्गाआश्रम (फोटो कथा)